အာဇာနည်နေ့ - ဝီကီပီးဒီးယား
မြန်မာပြည် လွတ်လပ်အောင်စွမ်းဆောင်ပေးခဲ့သော အာဇာနည်များအား အမှတ်ရအောက်မေ့သည့် အမှတ်တရနေ့
အာဇာနည်နေ့ သည် နှစ်စဉ် ဇူလိုင်လ ၁၉ ရက်နေ့တွင် ကျရောက်သော မြန်မာနိုင်ငံ၏ နိုင်ငံတော်အဆင့် အောက်မေ့ဖွယ်အထိမ်းအမှတ်နေ့ တစ်ရက်ဖြစ်ကာ ၁၉၄၇ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၁၉ ရက်နေ့တွင် မြန်မာနိုင်ငံ၊ ရန်ကုန်မြို့တွင် ဗိုလ်ချုပ် အောင်ဆန်း အပါအဝင် နိုင်ငံရေးတွင် အလွန် အရေးပါသော ခေါင်းဆောင်ကြီး ၈ ဦး နှင့် ကိုယ်ရံတော်တစ်ဦး လုပ်ကြံခြင်းခံခဲ့ရပြီး ကျဆုံးသည့်နေ့ကို အာဇာနည်နေ့ ဟု သက်မှတ်ပြီး ကျင်းပခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုနေ့တွင် အစိုးရရုံးများ၊ ဈေးဆိုင်ကန္နားများကိုပိတ်၍ နိုင်ငံတော်အလံကို တိုင်တစ်ဝက်၌ လွှင့်ထူထားကြလေသည်။
၂ ကိုယ်တိုင် ကိုယ်ကျ ပစ်ခတ် လုပ်ကြံ ခဲ့သူများ
၂.၁ သေဒဏ် အပြစ်ပေးခံရသူများ
၂.၂ သေဒဏ် မှ ထောင်ဒဏ် တစ်သက် တစ်ကျွန်းသို့ပြောင်းရွှေ့ကျခံရသူများ
၃ ဈာပန အခမ်းအနား
၃.၁ လူသတ်ဝါဒရှုတ်ချပွဲ ကြေညာချက်
၄.၁ အာဇာနည်နေ့ ဂုဏ်ပြုကဗျာ
၁၉၄၇ ခုနှစ်၊ မြန်မာစံတော်ချိန် ၁၀ နာရီ ၃၇ မိနစ်တွင် ရန်ကုန်မြို့လယ်ရှိ ဝန်ကြီးများရုံး၌ အစည်းဝေးပွဲကျင်းပနေချိန်ဖြစ်သည်။ အင်္ဂလိပ်ခေတ် မြို့စောင့်တပ်အမှတ် (၁၂) သေနတ်ကိုင်တပ်ရင်း၏ အမှတ်တံဆိပ်ကို တပ်ဆင်ထားသော စစ်ယူနီဖောင်းအပြည့်စုံဝတ်ဆင်ထားသော လူတစ်စုသည် ဝန်ကြီးများရုံးအတွင်း ဝင်ရောက်၍ ဗမာ့လွတ်လပ်ရေး ခေါင်းဆောင်အချို့အား ပစ်ခတ်လုပ်ကြံခဲ့ကြသည်။၎င်းနိုင်ငံတော်လုပ်ကြံမှုကြီးအား နယ်ချဲ့လက်ပါးစေ အတိုက်အခံ နိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုမှ ကြိုတင်စီစဉ်ထားခြင်းဖြစ်ပြီး ၎င်းအဖွဲ့အား ခေါင်းဆောင် ကြိုးကိုင်ထားသူအဖြစ် ဂဠုန်ဦးစောအား စွပ်စွဲခဲ့ကြသည်။ ထို့နောက်ဦးစောနှင့် အပေါင်းအပါများအား ဦးကျော်မြင့်၊ ဦးအောင်သာကျော်နှင့် ဦးစီးဘူးတို့ ပါဝင်သော အထူးခုံရုံးမှ အချိန်ယူ စစ်ဆေးပြီး ပြစ်မှုထင်ရှားသဖြင့် ၁၉၄၇ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ (၃၀) ရက်နေ့တွင် သေဒဏ်စီရင်ချက် ချမှတ်ခဲ့လေသည်။
တရားခံများက အဆင့်ဆင့်အယူခံ ဝင်ခဲ့သည်။ နောက်ဆုံး အယူခံလွှာကို ၁၉၄၈ ခု၊ ဧပြီလ (၂၇ ) ရက်နေ့တွင် တရားလွှတ်တော်ချုပ်မှ ပယ်ချလိုက်သည်။ ထို့နောက် သမ္မတထံ သနားခံလွှာ တင်သွင်းခဲ့ပြန်ရာ ခင်မောင်ရင်၊ သုခနှင့် မောင်နီတို့အပေါ်တွင် ချမှတ်ထားသော သေဒဏ်အမိန့်ကို ပယ်ဖျက်ပြီး တစ်သက်တစ်ကျွန်း ထောင်ဒဏ်သို့ လွှဲပြောင်းပေးခဲ့သည်။ ကျန်တရားခံများဖြစ်သော ဂဠုန်ဦးစော၊ သက်နှင်း၊ မောင်စိုးနှင့် မှုန်ကြီးတို့အား အင်းစိန်အကျဉ်းထောင်တွင် လည်းကောင်း၊ စိန်ကြီးနှင့် ရန်ကြီးအောင်တို့အား ရန်ကုန်အကျဉ်းထောင် (ယခု ရန်ကုန် အထွေထွေရောဂါ ကုဆေးရုံနေရာ)တွင်လည်းကောင်း၊ ၁၉၄၈ ခု၊ မေလ (၈) ရက်နေ့ အရုဏ်တက်ချိန် (၅)နာရီခွဲတွင် တစ်ချိန်တည်း ကြိုးဒဏ် စီရင်ခဲ့လေသည်။ တရားလွှတ်တော်ချုပ်နှင့် အထူးခုံရုံးမှ အတိုက်အခံများ၏ အယူခံများအားလုံးသည် အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် ရေးသားဖော်ပြခဲ့သည်။ အတိုက်အခံတို့၏ အယူခံအား ဒေါက်တာမောင်မောင်ရေးသားသည့် "နိုင်ငံတော်လုပ်ကြံမှု"တွင် ဖတ်ရှုနိုင်ပြီး "၁၉၄၈ခုနှစ် ဥပဒေမှတ်တမ်းများ"တွင်လည်း အထူးခုံရုံးနှင့် တရားလွှတ်တော်ချုပ်တို့၏ အယူခံကို ဖတ်ရှုနိုင်သည်။
ဦးအုန်းမောင်(သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးဌာန အတွင်းဝန်) နှင့်
ရဲဘော် ကိုထွေး(ဦးအဗ္ဗဒူရာဇတ်၏ သက်တော်စောင့်) တို့ဖြစ်ကြသည်။
ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီး ဦးတင်ထွဋ်သည် ထိုစဉ်က ဒဏ်ရာအပြင်းအထန်ရရှိခဲ့သော်လည်း အသက်ရှင် ကျန်ရစ်ခဲ့သည်။ မြန်မာလူမျိုးအများစုမှာ ၎င်းလုပ်ကြံမှုတွင် ဗြိတိသျှတို့သည် တစ်နည်းသို့မဟုတ် အခြားနည်းတစ်ခုခုဖြင့် ပါဝင်ပတ်သက် နေသည်ဟု ယုံကြည်နေကြသည်။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် ဗြိတိသျှ ဝန်ထမ်းနှစ်ဦး ဖမ်းဆီးစစ်ဆေးခံရပြီး ၎င်းတို့အနက်မှ တစ်ဦးသည် ဦးစော၏ ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် လုပ်ကြံမှုတွင် ထောက်ပံ့မှုနှင့် လုံလောက်သော စစ်သုံးကိရိယာများအား အဖွဲ့အစည်းအသေးအတွက် တပ်ဆင်ပေးမှုတို့ဖြင့် တရားစွဲဆိုခြင်းခံရသည်။ ၎င်းစစ်သုံး လက်နက်ကိရိယာများအား ဦးစော၏အိမ်ဘေးရှိ ကန်တွင် ပစ်ခတ်မှု ဖြစ်ပွားပြီး ချက်ချင်း ပြန်လည် သိမ်းဆည်း ရရှိခဲ့ကြသည်။ ဗိုလ်ချုပ်တို့ လုပ်ကြံခံရသည့်နေ့ ညနေပိုင်းမှာပင် ထိုလုပ်ကြံမှု၏ တရားခံ များဖြစ်သော ဦးစောနှင့် အပေါင်းအပါများအား ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကိုယ်တိုင် ဖွဲ့စည်းပေးထားသော သောင်းကျန်းမှု နှိမ်နင်းရေးတပ် တပ်ရင်းအမှတ် (၁)မှ တပ်ခွဲမှူး ဗိုလ်သိန်းဟန်နှင့် ရဲဘော်များသည် မရမ်းကုန်းမြို့နယ် အေဒီလမ်း (ယခု မေခလမ်း) အမှတ် (၄)ရှိ ဦးစောအိမ်သို့ဝိုင်းပြီး အိမ်တွင်းအိမ်ပြင် ရှာဖွေဖမ်းဆီးကာ စုံထောက် အင်စပိတ်တော် မစ္စတာဂျပ် ခေါင်းဆောင်သော ရဲအဖွဲ့လက်သို့ အပ်ခဲ့သည်။
၎င်းနိုင်ငံတော်လုပ်ကြံမှုကြီး ပြီးနောက်၊ များမကြာမီအချိန်တွင် မြန်မာပြည် ဗြိတိသျှဘုရင်ခံချုပ် ဆာ ဟာ့ဘက် ရန့်စ်သည် ဦးနုခေါင်းဆောင်သည့်ကြားဖြတ်အစိုးရအဖွဲ့အား အာဏာလွှဲပြောင်းပေးခဲ့ပြီးချိန်၊ ၁၉၄၈ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၄ ရက်နေ့သည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ တရားဝင်လွတ်လပ်ရေးနေ့ဖြစ်လာခဲ့သည့်ပြင် ဦးနုသည်လည်း မြန်မာပြည်၏ ပထမဆုံးသော ဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်လာခဲ့သည်။ ထို့နောက် ဇူလိုင်လ ၁၉ ရက်နေ့အား အာဇာနည်နေ့ဟု အမည်သမုတ်၍ ပြည်သူ့အားလပ်ရက်၊ နိုင်ငံတော်အဆင့် အောက်မေ့ဖွယ်အထိမ်းအမှတ်နေ့အဖြစ် နှစ်စဉ်ကျင်းပရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြသည်။
ကျဆုံးလေပြီးသော အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်ကြီးများ၏ ဂူဗိမာန်
ကိုယ်တိုင် ကိုယ်ကျ ပစ်ခတ် လုပ်ကြံ ခဲ့သူများပြင်ဆင်
ရန်ကြီးအောင် (ရဲဘော် ကိုထွေး အား ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ ပစ်ခတ် သတ်ဖြတ်ခဲ့ သလိုအစည်းအဝေး ခန်းမ အတွင်း ပစ်ခတ်မှုတွင် ပါဝင်သူ) 
သက်နှင်း (ဦးဆောင် ပစ်ခတ်သူ)၊
မောင်စိုး (ဦးဆောင် ပစ်ခတ်သူ)၊
စိန်ကြီး (ပစ်ခတ်မှုတွင် ပါဝင်သူ)၊
မှုံကြီး ခေါ် မောင်မှုန် (လုပ်ကြံမှု အစီအစဉ် တွင် ပါဝင်ပြီး ဂဠုန်ဦးစော နေအိမ် အဝိုင်းခံရမှု တွင် လက်နက် ကိုင် ဆောင်၍ ပြန်လည် ပစ်ခတ်သူ၊ ယခင် ရန်ကုန်ထောင် ကြိုးတိုက် တွင် - ယနေ့ခေတ် သူနာပြုတတ္ကသိုလ် )
စိန်ကြီး ခေါ် မောင်စိန် ခေါ် လှအောင်
ရန်ကြီးအောင် ခေါ် လှထွန်း
သေဒဏ် မှ ထောင်ဒဏ် တစ်သက် တစ်ကျွန်းသို့ပြောင်းရွှေ့ကျခံရသူများပြင်ဆင်
မောင်နီ ခေါ် ဘိုနီ ခေါ် ဂနီ
အာဇာနည် ခေါင်းဆောင်ကြီးများ လုပ်ကြံခံရပြီးနောက်တစ်နေ့ (၁၉၄၇၊ ဇူလိုင် ၂၀) မြို့မ-ဦးသန်းကြွယ်က ပထမဦးဆုံးအာဇာနည်နေ့ အခမ်းအနား စတင်ဦးဆောင်ကျင်းပနေပုံ
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းအမှူးပြုသော အာဇာနည် ခေါင်းဆောင်ကြီးများ လုပ်ကြံခံရပြီးနောက်တစ်နေ့ ၁၉၄၇၊ ဇူလိုင် ၂၀ တွင်ရန်ကုန်မြို့၊ ဆူးလေဘုရားအနီးရှိ ဖိုက်ချ်စကွဲယား (Fytche Square) (ယခု မဟာဗန္ဓုလ) ပန်းခြံ၌ နိုင်ငံတော်ဈာပနဗဟိုကော်မတီဝင် ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ကျောင်းသားများသမဂ္ဂ ဥက္ကဋ္ဌ ရန်ကုန်ခရိုင် ကျောင်းသားများ သမဂ္ဂ ဥက္ကဋ္ဌ တက္ကသိုလ် ကျောင်းသားများ သမဂ္ဂ ဒုတိယ ဥက္ကဋ္ဌ နှင့် မြို့မကျောင်းသားများ သမဂ္ဂ ဥက္ကဋ္ဌ မြို့မ-ဦးသန်းကြွယ် သည် ကျောင်းသားနှင့်ပြည်သူတစ်သိန်းကျော်ကိုဦးဆောင်ပြီး "လူသတ်ဝါဒရှုတ်ချပွဲ" ကို စတင်ဦးဆောင် ကျင်းပခဲ့သည်။ ထိုနေ့သည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ပထမဦးဆုံးအာဇာနည်နေ့ အခမ်းအနားဖြစ်သည်။ ၁၉၄၇ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၁၉ ရက်နေ့ညပိုင်းတွင် သူကိုယ်တိုင်ရေးသားထားသော "အသက်ပေးချီတက်ကြကုန်အံ့" အမည်ရှိကြေညာချက်စာတမ်းကို "လူသတ်ဝါဒရှုတ်ချပွဲ" အခမ်းအနားတွင် လက်သီးလက်မောင်းတန်း၍ နာကြည်းခံခက်စွာ ဖတ်ကြားခဲ့သည်။
အိုရဲဘော်တို့၊ ငါတို့၏ တိုင်းပြည် ခေါင်းဆောင်ကြီးများကား ပါတီစွဲ တိုက်ခိုက်မှုများ ကင်းစင်လျက် လုံးဝ လွတ်လပ်ရေး သို့ မရမနေဟူသော စိတ်ဇွဲအလုပ်တို့နှင့် သွေးမြေကျ ချွေးမြေခသည်အထိ ခြေလှမ်းယူ ကြိုးပမ်းလုပ်ကိုင်နေကြစဉ် ၁၉၄၇၊ ဇူလိုင်လ ၁၉ ရက်နေ့တွင် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း၊ သခင်မြ၊ ဦးဘချို၊ ဦးဘဝင်း၊ မစ္စတာ ရာဇတ်၊ မန်းဘခိုင် စသော ခေါင်းဆောင်ကြီးများမှာ မသမာ လူယုတ်မာ နယ်ချဲ့သမား လက်ပါးစေ အစုတ်တို့၏ စုတ်ပဲ့နုံချာသောလက်ဖြင့် ကျဆုံးခဲ့ကြရရှာလေသည်။ ငါတို့၏ ခေါင်းဆောင်ကြီးတို့၏ သွေးကား တိုင်းပြည်အတွက် ရဲရဲတောက် ပူဇော်ခဲ့ကြလေပြီ။
ငါတို့၏ ခေါင်းဆောင်ကြီးများနှင့်တကွ ကျန်သော မိဘဆွေမျိုး သားမယားတစ်စုအတွက် ငါတို့ကား ကြေကွဲဝမ်းနည်း၍ မဆုံးနိုင်တော့ပြီ။
ဤကဲ့သို့ ကြမ်းကြုတ်မိုက်မဲ သူရဲဘောနည်းစွာ ဗမာရာဇဝင်တွင်မက ကမ္ဘာ့ရာဇဝင်ရိုင်းလောက်အောင် ပြုမူရက်သော လူယုတ်မာ လူသတ်သမားတို့အား ငါတို့သည် လေးနက်ပြင်းထန်စွာ ပြစ်တင် ရှုတ်ချကြောင်း။
ငါတို့သည် တိုင်းပြည်အတွက် အသက်ကို ပူဇော်သွားရှာကြသော ငါတို့၏ အာဇာနည် ခေါင်းဆောင်ကြီးများအား လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ ချီးကျူး အလေးပြုပါ၏။
ယခုကဲ့သို့ ပြုမူကြခြင်းသည် ငါတို့၏ လုံးဝ လွတ်လပ်ရေးအတွက် အင်တိုက်အားတိုက် ကြိုးပမ်း ဆောင်ရွက်ချက်ကို တားဆီးပိတ်ပင် နှောင့်ယှက်သည်ကို ငါတို့ လုံးဝ ယုံကြည်ကြောင်း။
ယခုကဲ့သို့ ပြုမူလုပ်ကြံခြင်းသည် ငါတို့၏ လုံးဝလွတ်လပ်ရေးအတွက် အင်တိုက်အားတိုက် ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက် နေချက်ကို တားဆီးပိတ်ပင် နှောင့်ယှက်သည်ကို ငါတို့ လုံးဝ ယုံကြည်ကြောင်း။
သို့သော် ငါတို့ကား မတုန်မလှုပ်။ ယခုကဲ့သို့ ပြုမူခြင်းအားဖြင့် ငါတို့ လူငယ်ဟူသမျှ အပေါင်းတို့နှင့်တကွ တိုင်းရင်းသား အချင်းချင်းတို့မှာ ပိုမို ရင်းနှီးကြမည်ဟု ယုံကြည်ကြသည့်အပြင် ငါတို့၏ ပြင်းပြစွာချအပ်သော လုံးဝ လွတ်လပ်ရေး သံမဏိ အဓိဋ္ဌာန်ကိုပြုလျက် တစ်ဗိုလ်ကျ တစ်ဗိုလ်တက်စနစ် ဖြင့် ငါတို့၏ ဆူးညောင့်ခလုတ်များကို အမြစ်ပြတ်အောင် ရှင်းလင်း သုတ်သင်ကာ ငါတို့၏ ပန်းတိုင်သို့ ညီညွတ်စည်းလုံးစွာ အသက်ပေး ချီတက်ကြအံ့။
ဗမာပြည် လုံးဝ လွတ်လပ်ရမည်
အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်ကြီးများ၏ ဈာပန ကျင်းပရေးကော်မတီသည် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းအမှူးပြုသော အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်ကြီးများ၏ ရုပ်ကလာပ် များကို ပြည်သူပြည်သား အပေါင်းတို့ နောက်ဆုံးဂါရဝ ပြုနိုင်ရေးအတွက် ဇူလိုင်လ ၂၁ ရက်နေ့တွင် ရုပ်ကလာပ်များကို ရန်ကုန်မြို့၊ ဂျူဗလီဟောခန်းမသို့ ယူဆောင်လာခဲ့ကြသည်။ ဂျူဗလီဟော ခန်းမဆောင်ကြီးများ၏ တိုင်လုံးများ၊ အထက်မျက်နှာကြက်နှင့် နံရံများတွင် ရွှေရောင်ယိုးဒယား ပန်းခက်များဖြင့် ဆင်ယင်သည်။ စင်မြင့်၏အထက်တွင် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း၏ လွတ်လပ်ရေးရရှိရန် ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်နေပုံ ပန်းချီကား၊ ဖဆပလ၏ အလံတော်အောက်တွင် ကချင်၊ ကရင်၊ ကယား၊ ချင်း၊ မွန်၊ ဗမာ၊ ရခိုင်၊ ရှမ်း တိုင်းရင်းသားပေါင်းစုံတို့၏ စည်းရုံးမှု ပန်းချီကားကြီးများကို ချိတ်ဆွဲထားသည်။ ထိုပန်းချီကားချပ်ကြီးများ ရှေ့တွင် ဖဆပလ အလံတော်ကြီးနှစ်ခုကို အလျားလိုက်ချထားသည်။ ဂျူဗလီဟော ခန်းမ၏ စင်မြင့်ရှေ့၌ ရှိသော အခန်းများအနက် ရှေ့ဆုံးမှ အခန်းသုံးခန်းတွင် အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်ကြီးများ၏ ရုပ်ကလာပ်များကို ဂါရဝပြုခံရန် စီစဉ်နေရာချထားသည်။ ကျန်သော အခန်းနှစ်ခန်းကို ပရိသတ်များ ဂါရဝပြုခန်းအဖြစ် သတ်မှတ်စီမံထားသည်။
စင်မြင့်၏ ရှေ့ဆုံးအလယ်တည့်တည့်တွင် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း၏ ရုပ်ကလာပ်ကို ရွှေချထားသော မှန်ခေါင်းဖြင့်၊ ရွှေချထားသော သလွန်ထက်၌ တင်ထားပြီး ထီးဖြူနှစ်လက်မိုး ထားသည်။ နောက်ဖက်ခြေရင်းတွင် အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်ကြီး ငါးဦးဖြစ်သော ဦးဘချို၊ ဦးဘဝင်း၊ သခင်မြ၊ မန်းဘခိုင်၊ ဦးရာဇတ် တို့၏ ရုပ်ကလာပ်များကို ပြင်ဆင်ထားရှိ၍ ထီးဖြူတစ်လက်စီ မိုးထားသည်။ စင်မြင့်၏ လက်ယာဘက်တွင် အတွင်းဝန် အိုင်စီအက်စ် ဦးအုန်းမောင်နှင့် သက်တော်စောင့် မောင်ထွေး တို့၏ ရုပ်ကလာပ်ကို ထီးဖြူတစ်လက်စီ မိုးပေးထားသည်။ စင်မြင့်၏ လက်ဝဲဘက်တွင် မိုင်းပွန်စော်ဘွားကြီး၏ ရုပ်ကလာပ်ကို စော်ဘွားကြီး၏ အဆောင်အယောင်နှင့် အညီ သံလျင်းပေါ်၌ သလွန်တင်၍ ထီးဖြူများ မိုးထားသည်။ 
ဈာပန ကော်မတီသည် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနှင့် အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်ကြီးများ၏ ရုပ်ကလာပ်ကို ဂျူဗလီဟောခန်းမကြီးတွင် ၆ လ ထားရှိပြီး ပြည်သူလူထု အပေါင်း၏ ဂါရဝပြု ခံယူရန်စီစဉ်ခဲ့သည်။ ၁၉၄၈ ခုနှစ် ဧပြီ ၁၁ ရက်နေ့တွင် နိုင်ငံတော် ဈာပန အဖြစ် အာဇာနည်ကုန်းသို့ ပို့ဆောင်ဂူသွင်းခဲ့သည်။
အောက်ဖော်ပြပါကဗျာအား မူလတန်းကျောင်းများ၏ ကျောင်းသင်ခန်းစာများတွင်လည်း ထည့်သွင်း သင်ကြားလျက်ရှိသည်။
ဖေဖော်ဝါရီ ဆယ့်သုံး မှာ
ဪ- တောင်နန်း မြောက်နန်း၊
အောင်ပန်းညို့ရရှာတဲ့ အောင်ဆန်းတို့ သေပုံနှမြော...
↑ ၂.၀ ၂.၁ ဦးအောင်ခင်၊ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကို ဘယ်သူသတ်လဲ?
↑ ဒေါက်တာ မောင်မောင် ၏ နိုင်ငံတော် လုပ်ကြံ မှု။
↑ ဝါးခယ္မ : Myanmar's Martyr Day
↑ america.pink - online learning courses Resources and Information
↑ ပြည်ထောင်စုနေ့ : Myoma U Than Kywe မြို့မ-ဦးသန်းကြွယ် (English language version)
↑ မြို့မ-မြင့်ကြွယ် (Wednesday, July 20, 2016). "မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပထမဦးဆုံး အာဇာနည်နေ့နှင့် ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် မြို့မ-ဦးသန်းကြွယ်". The Myanmar Post (မြန်မာပို့စ်) Vol. 8 (No. 27).
↑ ခင်နှင်းဦး (၁၉၉၅ ဇူလိုင်လ). "ပထမဦးဆုံး အာဇာနည်နေ့ အခမ်းအနား". စာပေဂျာနယ် အတွဲ၂၊ အမှတ် ၁၁: စာမျက်နှာ ၄၈-၄၉-၅၀.
↑ ၁၉၄၇ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၂၃ ရက် မြန်မာ့အလင်းသတင်းစာ
↑ မြို့မ-မြင့်ကြွယ် (၁၆-၇-၂၀၂၀). "ပထမဦးဆုံးအာဇာနည်နေ့အစ မြို့မ-ဦးသန်းကြွယ်က". ဒီလှိုင်းစာစောင် အတွဲ ၉၊ အမှတ် ၂၁: စာမျက်နှာ ၁၄-၁၅. ဦးဉာဏ်ဝင်း.
↑ (ဂျူဗလီဟောမြင်ကွင်း၊တိုက်စိုး)(၁၉၄၇ခုနှစ်ထုတ်ဝေခဲ့သော စာနယ်ဇင်းကောတ်နှုတ်ချက်များ)လှမြင့်၊သံတော်ဆင့်၊တ၁မ၁၈
^ လှမြင့်၊ (ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်)၊ အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်ကြီးများ၏နောက်ဆုံးခရီး၊ အတွဲ ၁၊ အမှတ် ၁၈၊ မြန်မာသံတော်ဆင့်၊ ၁၄-၂၀ ဇူလိုင်လ ၂၀၁၂
ဗိုလ်ချုပ်ကို ဘယ်သူသတ် (Youtube မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်)။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=အာဇာနည်နေ့&oldid=700416" မှ ရယူရန်
၄ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၁၊ ၁၈:၃၅ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။